Goor Dhaw Ayaa Waxaa Ka Dhacay Qarax Weyn Meel U Dhaw Madax Tooyada – STAR FM SOMALIA
Qarax culus, ayaa wuxuu xilligii Maqribka uu ka dhacay afaafka hore ee Madaxtooyada Somaliya, faah faahin badan lagama haayo cidda qaraxaasi lala beegsaday.
Qaraxa wuxuu dhacay xilli Madaxtooyada ay ka socotay xaflad la sheegay in lagu soo xiraayo shirkii, ay maalmahaanba Madaxda Somalidu ku laheyd Magaalada Muqdisho.
Qaraxan, ayaa waxaa si weyn looga maqlay gees ka gees Magaalada Muqdisho, wuxuuna dadka reer Muqdisho soo xusuusiyay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee lagu weeraray Jazeera Hotel, 26-kii bishii July.
Warar kala duwan, ayaa ka soo baxaaya goobta rasmiga ah ee uu qaraxu ka dhacay, laakiin wararka xoogoodu waxay sheegayan in uu ka dhacay wadada u dhaxeyso Madaxtooyada iyo SYL Hotel.
Warar aan la xaqiijina waxay sheegayan qaraxa in uu ka dhacay irida hore SYL Hotel ee laga soo galo Madaxtooyada. Xubnaha shirka ka qaybgalaaya oo qaarkood deganaa Hotelka.
Isgaarsiinta nawaaxiga Madaxtooyada, ayaa ah mid aad ciriiri u ah, iyadoo ay yar yihiin wararka laga heli karo Madaxtooyada.
Qaraxan oo u muuqday mid ismiidaamin ahaa, ayaa wuxuu ku soo beegmayaa, xilli maalmihii la soo dhaafay la xoojiyay amniga guud ee wadooyinka soo galla Madaxtooyada.
Saddexdii maalmood ee la soo dhaafay, ayaa waxaa Madaxtooyada shir ku lahaa Madaxda Dowladda, Maamul Goboleedyada & Wakiilada Beesha Caalamka, waxaana looga hadlaayay wixii 2016 looga gudbi lahaa xilliga kala guurka, marka uu dhammaado waqtiga Dowladda.